Food to avoid in children – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” မကြှေးသငျ့ဘူးနျော “
လှနျလပွေီးသော နှဈတှနေဲ့ယှဉျလြှငျ ယနခေ့တျေမှာ စားစရာသောကျစရာတှထေဲ ရှေးခယျြစရာ ပိုမိုပေါမြားလာသညျ။အမြိုးအမညျစုံလငျလှသညျ။ကလေးမိဘမြားကို ကွညျ့လိုကျလြှငျလညျး မိဘပီပီ မိမိသားသမီးကို ကောငျးပညှေ့နျ့ပဆေို့တယျ့ စားသုံးဖှယျရာမြား ဝယျကြှေးလိုကွသညျ၊ဝယျကြှေးနကွေသညျ။သို့သျော မိဘမြားသိသငျ့သညျက အစားအစာမြားသညျ ဈေးကွီးတိုငျး စားကောငျးတိုငျး
မကောငျးပါ။မိမိကလေးကနျြးမာရေးအတှကျ သငျ့တျောသညျလညျးရှိသလို မသငျ့တျောသညျမြားလညျးရှိသညျ။ဈေးကွီးပေးဝယျရသညျ့ အစားအစာအခြို့မှာ မိဘမြားသာ ပိုကျဆံကုနျသှားသညျ ကလေးအတှကျအာဟာရမဖွဈသညျ့အပွငျ ကနြိးမာရေးထိခိုကျနိုငျစစေညျ။ဤသို့ဆိုလြှငျ ပိုကျဆံကုနျ အာဟာရမဖွဈ နှဈခါရှုံးမဟုတျပါလား?သို့ဖွဈ၍ မိဘမြား သတိထားစနေိုငျရနျအလို့ငှါ ကလေးမြားကို မကြှေးသငျ့သော အစားအစာမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျရပါသညျ။
ကလေးမြားအကွိုကျလညျးဖွဈ၊ဈေးကှကျထဲ လှယျလှယျကူကူပငျရရှိနိုငျ့သညျ့ အရသာမြိုးစုံ အရောငျမြိုးစုံ တံဆိပျမြိုးစုံ အခြိုရညျဗူးမြားသညျ ကလေးမြားအတှကျ အာဟာရမဖွဈစသေညျ့ သကွားသကျသကျသာပါဝငျသညျ့မတိုကျကြှေးသငျ့သောအရာတဈခုဖွဈသညျ။
ပေါငျမုနျ့အရှညျကွားထဲ ကွကျ/ဝကျအူခြောငျးနှငျ့ အသီးအရှကျအခြို့ညှပျ၊မယောနိဈစမျးထားသော ဟော့ဒေါ့မြား…။ကွညျ့လိုကျလြှငျတော့ စားခငျြစဖှယျ။သို့သျော ယငျးတို့ကိုပွုလုပျတဲ့ထဲ ကငျဆာဖွဈနှုနျးတိုးပှားစတေဲ့ အသားတှကေိုကွာရှညျခံအောငျပွုလုပျတဲ့နိုကျထရိတျဆိုတဲ့ ဓာတျတဈမြိုးပါဝငျနသေဖွငျ့ မစားသငျ့သောအသားအစာပငျ။
အသီးအနှံသှားရညျသာဆိုသျောငွား အသီးအနှံအစဈဆိုလို့ အိတျ/ဗူး တှငျပါသော အသီးအနှံပုံသာပါဝငျသညျ။ကနျြတဲ့ တကယျသားရမယျ့သှားရညျစာကျုတော့ ဆိုးဆေး ၊ကွာရှညျခံဆေး နှငျ့ သကွားမြားသာပါဝငျသညျ။ဒီလို ဓာတုဆေးခညျြးသကျသကျသာပါဝငျတဲ့ သှားရညျစာကို သငျ့ကလေးကို ကြှေးမညျလော?
ရှငျးပွသငျ့သလောကျ ရှငျးပွခဲ့ပွီးပွီဆိုတော့ မိဘမြားအနနေဲ့ သားသမီးမြားကို ဘယျလိုအစားအစာမြိုးရှေးခယျြကြှေးသငျ့လဲ သိလောကျပွီထငျပါတယျနျော။
” မကျွေးသင့်ဘူးနော် “
လွန်လေပြီးသော နှစ်တွေနဲ့ယှဉ်လျှင် ယနေ့ခေတ်မှာ စားစရာသောက်စရာတွေထဲ ရွေးချယ်စရာ ပိုမိုပေါများလာသည်။အမျိုးအမည်စုံလင်လှသည်။ကလေးမိဘများကို ကြည့်လိုက်လျှင်လည်း မိဘပီပီ မိမိသားသမီးကို ကောင်းပေ့ညွန့်ပေ့ဆိုတယ့် စားသုံးဖွယ်ရာများ ဝယ်ကျွေးလိုကြသည်၊ဝယ်ကျွေးနေကြသည်။သို့သော် မိဘများသိသင့်သည်က အစားအစာများသည် ဈေးကြီးတိုင်း စားကောင်းတိုင်း
မကောင်းပါ။မိမိကလေးကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်သည်လည်းရှိသလို မသင့်တော်သည်များလည်းရှိသည်။ဈေးကြီးပေးဝယ်ရသည့် အစားအစာအချို့မှာ မိဘများသာ ပိုက်ဆံကုန်သွားသည် ကလေးအတွက်အာဟာရမဖြစ်သည့်အပြင် ကျနိးမာရေးထိခိုက်နိုင်စေစည်။ဤသို့ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံကုန် အာဟာရမဖြစ် နှစ်ခါရှုံးမဟုတ်ပါလား?သို့ဖြစ်၍ မိဘများ သတိထားစေနိုင်ရန်အလို့ငှါ ကလေးများကို မကျွေးသင့်သော အစားအစာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။
ကလေးများအကြိုက်လည်းဖြစ်၊ဈေးကွက်ထဲ လွယ်လွယ်ကူကူပင်ရရှိနိုင့်သည့် အရသာမျိုးစုံ အရောင်မျိုးစုံ တံဆိပ်မျိုးစုံ အချိုရည်ဗူးများသည် ကလေးများအတွက် အာဟာရမဖြစ်စေသည့် သကြားသက်သက်သာပါဝင်သည့်မတိုက်ကျွေးသင့်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေါင်မုန့်အရှည်ကြားထဲ ကြက်/ဝက်အူချောင်းနှင့် အသီးအရွက်အချို့ညှပ်၊မယောနိစ်စမ်းထားသော ဟော့ဒေါ့များ…။ကြည့်လိုက်လျှင်တော့ စားချင်စဖွယ်။သို့သော် ယင်းတို့ကိုပြုလုပ်တဲ့ထဲ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းတိုးပွားစေတဲ့ အသားတွေကိုကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်တဲ့နိုက်ထရိတ်ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်နေသဖြင့် မစားသင့်သောအသားအစာပင်။
အသီးအနှံသွားရည်သာဆိုသော်ငြား အသီးအနှံအစစ်ဆိုလို့ အိတ်/ဗူး တွင်ပါသော အသီးအနှံပုံသာပါဝင်သည်။ကျန်တဲ့ တကယ်သားရမယ့်သွားရည်စာက်ုတော့ ဆိုးဆေး ၊ကြာရှည်ခံဆေး နှင့် သကြားများသာပါဝင်သည်။ဒီလို ဓာတုဆေးချည်းသက်သက်သာပါဝင်တဲ့ သွားရည်စာကို သင့်ကလေးကို ကျွေးမည်လော?
ရှင်းပြသင့်သလောက် ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ မိဘများအနေနဲ့ သားသမီးများကို ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးရွေးချယ်ကျွေးသင့်လဲ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။